Sawirro+war warmurtiyeed: Shir ballaaran oo ka dhan ah madaxweynaha Koonfur galbeed oo Muqdisho ka dhacay
Shir ballaaran oo ay kasoo qaybgaleen xildhibaanada baarlamaanka Koonfur galbeed, kuwa dowlada federaalka Soomaaliya, siyaasiyiin, wax garad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ah ee deegaanada Koonfur galbeed ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho.
Shirka oo ay ka hadleen masuuliyiin kala duwan ayaa lagagasoo hor jeeday madaxweynaha xilkiisa gudan waayay ee Koonfur galbeed Shariif Xasan kaasoo ay xildhibaanadu ku eedeeyeen inuu dayacay dadka iyo deegaanada Koonfur galbeed dhaqaalihii maamulkana uu u adeegsado safaro 85% wakhtigiisa kuwaasoo aanan wax dan ah ugu jirin Koonfur galbeed.
Madaxweyne Shariif ayaa lagu eedeeyay inuu ku mashquulsanyahay dhaqaale urursi iyo siyaasado isaga u gaar ah islamarkaasna ay dadkii uu metalayay ay lasoo darseen gaajo, cuduro iyo amni daro baahsan.
Dhanka kale, waxaa lagu eedeeyay madaxweyne Shariif Xasan inuu curyaamiyay hay’adaha sharci dejinta Koonfur galbeed beesha caalamkana ay mar hore joojisay mashaariicdii iyo dhaqaalihii ay ugu talagashay Koonfur galbeed.
Hadaba xildhibaanada Koonfur galbeed oo baaq u diray madaxda sare ee dowlada federaalka Soomaaliya, wasiirada lagasoo doorto deegaanada Koonfur galbeed iyo xildhibaanada heer federaal ayaa dalbaday in lagu caawiyo gudashada waajibaadkooda ku aadan wax ka qabashada Shariif Xasan ayada oo uu shirkii maanta u muuqday mid u gogol xaaraya mooshin xilka lagaga qaadi rabo madaxweynaha fashilmay ee Koonfur galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan.